OSX: Hazie windo gị | Martech Zone
Sunday, Jenụwarị 21, 2007 Na Tọzdee, Septemba 16, 2014 Douglas Karr
Ọtụtụ n’ime unu maara na abụ m obere Mac ọhụrụ. Otu n'ime ihe m na-enwe maka OSX bụ mgbanwe nke ọdịdị na ihu nke interface. Ndụmọdụ a nwere ike daa ụda, mana ọ masịrị m. M na-hazie windo iwu windo na Microsoft Windows mgbe ọ bụla m na-eji ya… mana nhọrọ dị oke.
Na ọnụ, M nwere ike ezipụta ojiji nke ọ bụla font, agwa obosara, ahiri elu, font size, font agba, shadowing, ndabere, ndabere opacity, cursor eji… chaị! Kwuo banyere iwere windo shei ma mee ka ọ dị mma. (Ọ dị mma, amaara m… Abụ m onye geek uber). Ma nke a ọ dịghị mma dị mma?
Y'oburu na ibu OSX ohuru, o di nfe:
Mepee Ọnụ site na folda ngwa gị ma ọ bụ n'ọdụ ụgbọ mmiri.
Gaa na nchịkọta menu gị ma họrọ Ntọala Ohere.
Mee mgbanwe ndị ịchọrọ.
mkpa: Gaa na menu faili gị wee pịa Jiri Ntọala dị ka ndabere
Oge ọzọ ị meghere Terminal na ụzọ mkpirisi ahụ, ị ​​ga-enweta windo ahụ dị mma iji mepee. Ugbu a ọ bụrụ na m matara ihe m ga-etinye na ebe ahụ…. 🙂
Tags: osx ọnụỌnụ
Jenụwarị 21, 2007 na 1:33 PM
M a bit nke a Mac newbie onwe m Doug, ekele maka Ama. M hụrụ n'anya n'anya nke a ọkara transperent Ọnụ window!